အတိုင်ပင်ခံများအတွက်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် -MarTech Blog
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 27, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 2, 2012 တိ Piazza
စီမံကိန်းသုံးမျိုးရှိတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများ၊ သင့်အတွက်ကိုင်တွယ်ရန်အခြားသူတစ် ဦး ကိုသင်ပေးချေနိုင်သည့်အရာများနှင့်အခြားသူများနှင့်သင်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်သည့်အရာများ။ Project Management ဆော့ဖ်ဝဲသည်တတိယအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ငါမကြာသေးမီက Basecamp နှင့်ဆင်တူပေမယ့်အတိုင်ပင်ခံနှင့်အလွတ်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နှင့်အတူ Mavenlink, တိမ်တိုက် -based စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု application ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Mavenlink သည်သင်အား Basecamp ကဲ့သို့စီမံကိန်းများဖန်တီးရန်၊ ဖောက်သည်များကိုဖိတ်ကြားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆီသို့ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်တာဝန်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Mavenlink ကိုမည်သည့်အရာကခွဲခြားသည်မှာငွေတောင်းခံရန်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။
Mavenlink တွင်ပရောဂျက်တစ်ခုဖန်တီးပြီးသင်ဘတ်ဂျက်ဆွဲနိုင်သည်။ စီမံကိန်းကိုစီစဉ်ရာတွင်သင်သည်အလုပ်များနှင့်ရလာဒ်များကိုတည်ဆောက်သည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အချိန်ကိုငွေပေးချေနိုင်လျှင်အလုပ်ချိန်နာရီကိုသတ်မှတ်ပါ။ ငွေတောင်းခံမှုများစုဆောင်းလာသည်နှင့်အမျှစီမံကိန်းဒိုင်ခွက်သည်သင်နှင့်သင်ငွေကိုဘတ်ဂျက်တွင်ရပ်နေသူကိုပြသလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ငွေတောင်းခံလွှာရှုထောင့်သည်အခြားပူးပေါင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှပျောက်ဆုံးနေသောသော့ချက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် Freelancer များနှင့်အတိုင်ပင်ခံများသည်ဖောက်သည်များနှင့်စီမံချက်ကို အခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပြီးအချိန်ကုန်သမျှကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်အစီရင်ခံရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဘတ်ဂျက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်းအတွက်ယန္တရားတစ်ခုပေးခြင်းသည်ရောင်းချသူနှင့်သုံးစွဲသူ၏နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည်။ အံ့အားသင့်စရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက်များကွဲပြားသောအခါသို့မဟုတ်စီမံကိန်းအပြောင်းအလဲတစ်ခုတွင်ဘတ်ဂျက်ပြောင်းလဲမှုတွင်ထင်ဟပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါပေါ်လာလိမ့်မည်။ Mavenlink သည်ဘတ်ဂျက်ငွေကိုစကားပြောဆိုမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
စီမံကိန်းကာလအတွင်း PayPal ပေါင်းစည်းမှုမှတစ်ဆင့်ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင်လက်ခံနိုင်ပြီးငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ Mavenlink သည် ၄ ​​င်းတို့၏ပုံမှန်ကုန်သည်ကြေးကိုလျှော့စျေးပေးသည့် PayPal နှင့်အထူးနှုန်းထားကိုညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပြက္ခဒိန်စည်းညှိခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းဝေငှခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိရိယာများသည်၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်အချိန်ယူရသည့်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။ Basecamp ၎င်းတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်သီးခြားစီစီမံချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လုံလောက်သောကြီးမားသည့်အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆက်လက်ရေပန်းစားသည်။ ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစီမံကိန်းများပါသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ထိုကဲ့သို့သောဆာဗာအခြေပြုဖြေရှင်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည် ActiveCollab။ အကယ်၍ သင်သည်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ ဝဘ်တီထွင်သူသို့မဟုတ်အလွတ်တန်းဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ပါက၊ Mavenlink သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
Tim Piazza သည် Social LIfe Marketing နှင့်တည်ထောင်သူဖြစ်သည် ProSocialTools.com၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူဒေသခံဖောက်သည်များရောက်ရှိရန်အဘို့အသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်။ သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်စေသောဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ခြင်းမရှိသောအခါ၊ တိသည် mandolin နှင့်လက်မှုပညာပရိဘောဂများကိုနှစ်သက်သည်။
ပြောင်းလဲမှုများသင်၏ Vis ည့်သည်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပါ
ဇန်နဝါရီ 28, 2011 မှာ 4: 06 AM
ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ Basecamp အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ငါသိခဲ့မယ်ဆိုရင်!
28:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 21
Doug, ငါငါ့ post ကိုရေးသားစဉ်အခါငါတကယ်စိတ်ထဲရှိခဲ့ပါတယ်။ မင်းက Basecamp ကနေထွက်သွားပြီး Mavenlink ကိုခင်ဗျားကြိုက်နှစ်သက်မလားဆိုပြီးသိချင်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Mavenlink ဟာပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်မှာအများကြီးပိုလွယ်တယ်။ သင်ကော်ဖီကိုအောက်ထပ်ရှိကော်ဖီမှဖြတ်တောက်ရန်ပင်မလိုပေ။ 🙂
28:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 29
ငါ PBworks ကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ကိုသင်နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြီလား။
28:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 19
ငါအခုထိမရှိသေးဘူး။ ငါထင်တာကတော့ PBworks သည် social network-project management mashup ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျနော့်ရဲ့ ၅၂၈၀ ′အမြင်ကသင်ကလူတိုင်းကို system ထဲကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပိုကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပိုကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုသင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်၊ အချက်အလက်များစုဆောင်းရန်သင်၏ပရောဂျက်များသို့ဆွဲထုတ်သည်။ ၎င်းသည်အတိုင်ပင်ခံ / သုံးစွဲသူ၏မြင်ကွင်းအတွက်သေချာပေါက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ
28:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 43
ငါ Mavenlink ကိုမင်းရဲ့အကဲဖြတ်မှုအတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ဒီ post နဲ့ရှုထောင့်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ငါ (Mavenlink ကိုတည်ထောင်သူတစ် ဦး အဖြစ်) အနည်းငယ်ဘက်လိုက်နေပြီး၊ သင်သည် ActiveCollab ကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရသလဲဟုတွေးကောင်းတွေးနေမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်ခန်းစာနှင့်ပါဝင်သူများ၏အားသာချက်များကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
28:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 04
Sean ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြော်ငြာအေဂျင်စီတစ်ခုမှာ ActiveCollab ကို New Media ၏ VP အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရာနှင့်ချီသောအတွင်းပိုင်းပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့်ရာနှင့်ချီသောအခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားစိတ်ကြိုက်အက်ပ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ကိုယ်ပိုင်စီစဉ်ထားသောဖြေရှင်းချက်ကိုလိုချင်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားပြောရရင် ActiveCollab ဟာနည်းနည်းလေးခက်ခဲပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့အတွက်ခေါင်းကိုက်တယ်။ ငါ Mavenlink အဲဒီအချိန်ကရရှိနိုင်ခဲ့မထင်ကြဘူး။ 🙂
ရှင်ပေါလု C. Easton
30:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 05
နည်းနည်း Onit တူသောအသံ။ Mavinlink သည်ရှေ့နေများအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အရာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ PBworks Legal ထုတ်ဝေမှုကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးယေဘူယျအကြောင်းအရာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်၎င်းကိုသဘောကျမိသည်၊ သို့သော် PM သည်ဝီကီအပေါ်ပါးရိုက်ခြင်းကဲ့သို့ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည် အဲဒါဟာ PBworks ကိုကြည့်ပြီးကတည်းကခဏပါပဲ။
1:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 42
Hmm, ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်အလွယ်တကူမှားကောင်းမှားနိုင်သည်။ သို့သော်ရှေ့နေများသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏သတင်းအချက်အလက်များကို“ cloud service” ဝန်းကျင်တွင်ထားရှိခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုအထူးဂရုပြုမိပုံရသည်။ သငျသညျစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျမိုcould်းတိမ်သည်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်ထက်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိနိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းပြtheနာမှာ အကယ်၍ သုံးစွဲသူ၏ဒေတာကိုဆိုးရွားသောထိတွေ့မှုများရှိခဲ့ပါကမည်သူကတာ ၀ န်ယူမည်၊
သင်ဤနေရာနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပုံရသည်။ ဒီဟာကိုသင်ဘာလုပ်သလဲ မိုprofession်းတိမ်၌ operating အခါဥပဒေရေးရာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကဘယ်လိုသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်လျှော့ချသလဲ?
2:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 33 တွင်
သင် LumoFlow ကိုကြည့်ဖူးလား (http://www.lumoflow.com)?
၎င်းသည် Basecamp အတွက်အလွန်တတ်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးထားပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အထူးသဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်သုံးစွဲသူများနှင့်ပူးပေါင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင် (Basecamp ကဲ့သို့စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမဟုတ်) ကိုဖန်တီးရန်အာရုံစူးစိုက်နေသောကြောင့်ငွေတောင်းခံသည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါ။
မေလ 2, 2012 မှာ 9: 29 pm တွင်
မင်းရဲ့ blog post ကို Google search ကနေရှာတွေ့တယ်။ Mavenlink ကိုမင်းသုံးနေသေးလား။ အတွေးများ? ငါတယောက်တည်းလုပ်ကိုင်နေစဉ် (ဝက်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး) ကျွန်ုပ်သည် PM ကိရိယာကောင်းတစ်ခုလိုသည်။ ငါ WorkETC ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမနှစ်သက်ပါဘူး။ Basecamp သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွက်မသင့်တော်ဟုထင်ရသည်။
စက်တင်ဘာ 11, 2012 မှာ 6: 36 AM
Comcware, Basecamp ထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဖြေရှင်းနည်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံရန်သင့်အားအကြံပေးလိုသည်။
9:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 07
သင်ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ ဒီ post ကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီ (၂ နှစ်နောက်ကျပြီ!)